स्वास्थ्य/शिक्षा Archives - Solution Khabar
स्वास्थ्य प्रमुख र डाक्टरले लगाए सँगै उदयपुरमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु
दूतावास र ल्याबको सेटिङमा कोरोना पोजेटिभ देखिने विदेश उडे, नेगेटिभ देखिने रोकिए
काठमाडौं । नेपालस्थित साउदी दूतावास, सलाम एयर र निजी प्रयोगशालाको सेटिङमा कोरोना पोजेटिभ देखिएकालाई पनि विदेश उडाइएको छ। साउदी अरेबियाको लागि सलाम एयरले लाजिम्पाट स्थित सूर्या प्रयोगशालाको सेटिङमा अर्को प्रयोगशालामा कोरोना पोजेटिभ देखिएका एक युवालाई विदेश उडाएको हो। धनुषाबाट आएका युवा ह्याम्स अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिए पनि शुक्रबार बिहान साउदी उडेका छन्। […]
खोटाङ । खोटाङ जिल्लाका दशमध्ये छ स्थानीय तहले बन्द रहेको विद्यालय पुनःसञ्चालन गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण शिक्षण संस्था बन्द हुँदा शैक्षिक कार्यतालिका नै प्रभावित भएपछि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय चलाउन अनुमति दिएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन शुरु भएको हो । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप अघि बढाउन अधिकार प्रत्यायोजन भएपछि हाल […]
काठमाडौं । देशभर काेराेना भाइरसकाे संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु पनि संक्रमित भइरहेका छन् । यस संकटको समयमा आफ्नो घरपरिवार, बालबालिकालाई छाडेर बिरामीको सेवामा दिनरात खटिने चिकित्सक, नर्स तथा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी सधै सम्मानका पात्र हुन् । तर वर्तमान अवस्थामा कोरोना संक्रमण भइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य व्यक्तिलाई हेरिने नकारात्मक दृष्टिकोणले थप अर्को समस्या सृजना भइरहेको छ । […]
देश कोरोना संक्रमणमा लडिरहेका बेला धरानमा तीनजना डेंगु संक्रमित फेला
धरान : धरानमा तीनजनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ। सिङ्गो मुलुकको ध्यान कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा केन्द्रित भइरहेकोे बेलामा धरानमा भने यो गर्मी सुरु भएसँगै डेंगुको सङ्क्रमण देखिन थालेको हो। धरानको वीरेन्द्र मेडिकल हलमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आएका धरान उपमहानगरपालिका–१२ का ५४ वर्षीय एक महिला र वडा नम्बर १५ का १९ वर्षीय एक युवकमा डेंगु भेटिएको डा. […]
काठमाडौं : चीनमा आविष्कार गरिएको कोरोना भाइरस (काभिड–१९) को सुई (भ्याक्सिन) लगाएका चिनियाँ स्वय्मसेवकहरुको पहिलो टोली स्वस्थ रहेको बताइएको छ। सुई लगाएपछि १४ दिने क्वारेन्टाइनको बसाईंमा उनीहरु सबै स्वस्थ रहेको डेलीमेलले जनाएको छ। उहानमा गरिएको उक्त पहिलो परीक्षणमा भाग लिएका १४ जना स्वय्मसेवक फिर्ता भएका हुन्। शुक्रबारसम्म १०८ जना स्वय्मसेवकहरुमध्ये १८ जनाले सबै स्वास्थ्य परीक्षण […]
चौधरी फाउन्डेसन द्धारा जिल्ला हस्पिटल उदयपुरलाई स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
जिल्ला हस्पिटल उयपुरलाई चौधरी ग्रुप काठमाण्डौँले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई फिल्डमा र उपचार गर्दा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य समाग्रिहरु सहयोग गरेको छ। चौधरी ग्रुपको सयंमसेवक तथा सामाजिक अभियान्ता नजवुल खानले हस्पिटलको निमित्त सुपरिटेन्डेन जिवनारायण मन्डललाई सामाग्रि हस्तान्तरण गरेकी हुन्। चौधरी ग्रुपले अस्पताललाई ५ सेट पि.पि.इ र सर्जिकल माक्स सहयॉग गरेको हो। यसैगरी गजेन्द्र नाराणण सिंह अञ्चल अस्पताल राजविराज लाई […]
धुलिखेल अस्पताल, वीपी प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालमा पनि कोरोना परीक्षण
काठमाडौं : नोभल कोरोना भाइरसका बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालबाहेक अन्य तीन स्थानमा पनि गरिने भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएमा धुलिखेल अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान धरान र वीर अस्पतालमा परीक्षणको तयारी गरिएको हो। ती अस्पतालमा तत्कालै यन्त्र उपकरण जडान गर्न लागिएको सञ्‍चार तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज […]
पाँच सर्त : शरीरमा प्रतिरक्षा क्षमता विकास गर्ने
मानौ कुनै सरुवा रोग फैलियो, जसरी अहिले कोरोना भाइरस फैलिएको छ । त्यस्ता रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । तर, उक्त रोगको भाइरसले एकै ठाउँम भएका व्यक्तिमध्ये कसैलाई चाडै असर गर्छ, कसैलाई गर्दैन । किन ? भाइरसले मान्छे छानेर असर गर्ने पक्कै होइन । भाइरसले सबैलाई आक्रमण गरेकै हुन्छ । तर, कसैलाई उक्त आक्रमणले असर […]